Faallo: Bayaanka Xukuumadda Soomaaliya ee khilaafka dalalka Carabta – Kasmo Newspaper
Faallo: Bayaanka Xukuumadda Soomaaliya ee khilaafka dalalka Carabta
Updated - June 7, 2017 5:19 pm GMT
London (Kasmo), Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa ka soo saartay war qoraal ah oo ku aaddan xiisadda siyaasadeed ee ka dhex qaraxday dhowaan dalalka carabta, kuwaas oo tiro ka mid ah xiriirkii Dibolomaasi ugu jareen dalka Qadar.
War-saxaafadeedka oo laga soo saaray Wasaaradda Arrimaha Dibadda waxaa lagu muujiyay sida Xukuumadda Soomaaliya uga walaacsantahay khilaafka soo kala dhex galay dalalka walaalaha ah ee Carabta, lsla markaasna diyaar ugu tahay ka qaybgalka sidii loo daweyn lahaa.
Soomaaliya waxay ka tahay xubin Ururka Jaamacadda Carabta oo ay ku soo biirtay sannadkii 1974kii, xilligii xukuumaddii Kacaanka ee uu hoggaaminayay (aun), Jeneral Maxamed Siyaad Barre.
Ma ahayn go’aan ka soo baxay xukuumad matalaad dadweyne haysata, sida Barlamaan la soo doortay, mana jirin Afti dadweyne oo loo qaaday in xubin laga noqdo ururkaas, waxaana jiray tiro siyaasiyiin ahaa oo shaki badan ka qabay tillaabadaas.
Waxaa ka mid ahaa (aun), Dr. Maxamed Adan Sheikh oo rumaysnaa in gelitaanka Jaamacadda Carabta u soo jiidi doono Soomaaliya in ay gasho mowqif ciriiri ah marka uu dhasho khilaaf la mid ah midkaan oo kale.
Soomaalida iyo guud ahaan dadyowga carabta waxaa ka dhexeeya xiriir soo-jireen ah oo taariikhi ah kuna qotoma diin, dhaqan iyo ganacsi, kaas oo heerkii wanaagsanaa oo uu joogay ku habboonaa in lagu dhowro, sidaasna ku fillayd.
Dalalka Carabta oo caado ahaan waligood khilaafkoodu yahay mid an dhammaan, waxay ahaayeen qaar u siman Soomaaliya, ka hor gelitaankii Jaamacadda, mid walbana gaarkeeda uga hesha wixii ay u baahato, iyada oo qolaba midda kale dhinaceeda ku colaadin.
Laakiin ku-biiritaankii Jaamacadda Carabta wuxuu Soomaaliya ka dhigay qayb in ay ka noqoto khilaafyo silloon oo dhexdooda dhaca, qaarkoodna, inta badan, dano qoys iyo shakhsi ku fadhiyaan.
Dhowaan ayey ahayd markii Maamulkii Madaxweyne Xasan Sheekh xiriirkii Diblomaasi u jaray dalka Iiraan oo (isla maalintaas lacag loogu beddelay), iyo qoraal loo diray Sweden, kuwaas oo labaduba xiriir la lahaa khilaaf iyaga iyo Sacuudiga dhex maray, ee aan lug ku lahayn dhibaato dalalkaasi u geysteen Soomaaliya.
Maanta, duruufaha gaarka ah ee aynu ku jiro nooma oggolaanayaan in aynu hadba dhexda ka galno qalalaaso siyaasadeed iyo dano iska soo horjeeda oo an si toos ah u taabanayn daneheena istrateejiga ah.
Bayaanka Xukuumadda Madaxweyne Farmaajo ee dhexdhexaadka looga noqday qalalaasahaas waa mid sax ah, una danaynaya danaha istratejiga ah iyo madaxbannaanida qarameed ee Soomaaliya.
Waxaase ka sii fiicnayd in an lagaba hadlin inta laga gaarayo madal ku habboon oo Ajende ahaan arrintaas dalalka ay khusayso laga soo hordhigayo, markaas oo mowqifkaaga siyaasadeed aad si madaxbannaan u sheegan karto.
Sacuudiga oo Iiraan kula jira baratan dhanka Nuklearka ah
Chad oo dib ula soo ceshatay Qadar xiriirkii Dibolomaasiga ahaa
Itoobiya: qalalaaso maalintii 3aad ka soconaya Gobolka Amxaarada
Itoobiya: Ra’iisal Wasaare Desalegn oo si lama filaan ah isu casilay maanta
Canada: Are Refugees Welcome?-22 December 2017
Khudbaddii R/Kheyre ee Q.M-22 Sep.2017
Recovery in Somalia: How Do We Sustain Gains Against Al-Shabab
Caddaalad darrada & Garsoorka Soomaaliya
Shirkii Jaraa’id Madaxweynayaasha M.C.Farmaajo-I.Cumar Geelle
Shirkii jaraa'id ee Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti. fadlan share adigoo ku mahadsan.
Posted by Farmaajo Supporters on Wednesday, May 24, 2017
London Somalia Conference 2017 – 11 May 2017 – English Language
Xafladdii Wafdigii Madaxweyne farmaajo ee London-10 May 2017
Shirkii Jaraa’id ee Madaxweyne Farmaajo & R/Wasaare Desalegn
Daawo BBC Somali oo Televishin Qurux badan yeelatay
Digniinta Abwaan Nageeye ee Madaxweyne Farmaajo
CIID W A N A A G S A N iyo HAMBALYO KAL iyo LAAB ah
Minister praises British Muslim community at DS Eid reception
Prime Minister Eid al-Adha message:
Wargeyska Kasmo wuxuu idin leeyahay meel aad joogtaamba: ‘Ku Ciida Caafimaadsan’
Alan Henning oo British ah ayaa Daacish gawracday
Cabdisaciid Ismaaciil: “Ruuxii Buug Gubaa, Dadna Waa Gubaa!”
© Copyright 2015 Kasmo Newspaper · Designed by Ramaas Software